FAQ: Frequently Asked Questions – SUNNY eSTORE
SUNNY eSTORE is Myanmar’s leading e-commerce platform which is planned to offer over 5000+ products in mobile, tablet, home appliances, camera & other electronics categories, by the end of 2020. It aspires to be one of country’s pioneer in providing great online-purchase experience to customers. It is launched for limited audience in 2019 and the audience-base will gradually be increased by Oct 2020. Buy products from SUNNY eSTORE and enjoy this unique shopping experience. !
SUNNY eSTORE ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ဆောင် e-commerce ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ကင်မရာနဲ့ အခြားအီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်း အမျိုးပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကို ၂၀၂၀ အကုန်မှာ ရောင်းချသွားနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ Customer တွေကို အွန်လိုင်းကနေ အကောင်းဆုံး ရောင်းချပေးနိုင်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ဆောင်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကတည်းက ဝယ်ယူသူ အကန့်အသတ်နဲ့ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူပမာဏကို ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလအထိ တဖြေးဖြေး တိုးချဲ့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ SUNNY eSTORE မှ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူပြီး ထူးခြားတဲ့ စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကို ခံစားကြည့်ပါ။ !
သင်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန် ဘယ်နှစ်နာရီရှိပါသလဲ?
On this Sunny eStore website and our other channels like facebook you may browse products and place orders and make payment 24 hoursaday7days per week 365 days per year. Our customer service team operates on the telephone and on facebook messenger from 8am to 8pm.
Sunny eStore website တွင် Facebook ပေါ်ရှိ အခြားသော channel များကဲ့သို့ ထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေခြင်း၊ မှာယူခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းတို့ကို ၂၄ နာရီ၊ ၇ ရက်၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မိမိတို့၏ Customer service အဖွဲ့မှ ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Facebook Messenger မှ သော်လည်းကောင်း နံနက် (၈) နာရီမှ ည (၈) နာရီအထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
You may return most new, unopened items within 14 days of delivery forafull refund. You can find our Conditions for Returns here.
ပြန်အမ်းငွေအပြည့်အတွက် အသစ်အတိုင်း လုံးဝ ဖွင့်မဖောက်ရသေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ၁၄ ရက်အတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။ ပြန်လည်အပ်နှံမှုအတွက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
How do I return and refund an order?
မှာယူမှုကို ဘယ်လို ပြန်အပ်ပြီး ပြန်အပ်ငွေ ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ?
ပြန်လည်အပ်နှံနည်း လမ်းညွှန်ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Do I have to pay for shipping charges for returns?
ပြန်အပ်နှံတဲ့အတွက် ပို့ခ ပေးရပါသလား?
e-store offers free returns currently if you returnalimited period of time as defined by suppliers in the unused condition.
လက်ရှိ e-store က ဝယ်ယူမှုတွေကို supplier များမှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း အသစ်အနေအထားအတိုင်း ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ပါက အခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
How long will it take to receive the return/ refund feedback?
ပစ္စည်းပြန်အပ် / ငွေပြန်အမ်းခြင်းအတွက် တုံ့ပြန်မှုကို ဘယ်လောက်ကြာမှ ရမလဲ?
We will contact you via SMS, Facebook or email within 2-3 working days of receiving the item at our warehouse, where we will evaluate the item for quality and process it.
သိုလှောင်ရုံက ပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိပြီးတာနဲ့ ပစ္စည်း အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ပြီး၂-၃ ရက်အတွင်းမှာ SMS၊ Facebook သို့မဟုတ် အီးမေးလ်နဲ့ သင့်ကို ဆက်သွယ်ပါမယ်။
How do I know if eSTORE has received my online return request?
eSTORE က ပစ္စည်းပြန်အပ်ဖို့ တောင်းခံတာကို ရ/မရ ဘယ်လို သိနိုင်ပါသလဲ?
When you complete the Online Return Process, there will beaconfirmation on our website saying that your request has been updated successfully.
အွန်လိုင်းပစ္စည်းအပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြည့်စွက်ပြီးတာနဲ့ သင့်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကိုအောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီးကြောင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ အတည်ပြုချက် ရပါလိမ့်မယ်။
How do I track my return status in case eSTORE comes to pick up the item?
eSTORE က ပစ္စည်းကို လာယူတဲ့အခါမှာ ပစ္စည်းပြန်အပ်နှံတဲ့ အခြေအနေကို ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ?
Tracking is not available for the time being but we are working on it and appreciate your patience. Please contact customer service if you want an update on your return.
အခြေအနေကို ခြေရာခံမှု (tracking) က လက်ရှိမှာ မရရှိနုိင်သေးပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ နားလည်သည်းခံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြန်လည်အပ်နှံမှုကို ပြောင်းလဲလိုပါက customer service သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Can I exchange/returnaproduct without the invoice?
ငွေတောင်းခံလွှာမပါဘဲ ကုန်ပစ္စည်းကို လဲလှယ် / ပြန်ပို့မလား။
If you received an invoice, please put it into the return package. You can check out our Online Return Process here. If your order did not include an invoice, e-store will use our order management system to verify whether your product was purchased via the e-store website and process your return request.
ငွေတောင်းခံလွှာကို လက်ခံရရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်ပို့မည့်အထုပ်ထဲသို့ ထည့်ပေးပါ။ အွန်လိုင်းပစ္စည်းအပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ် ဒီမှာ စစ်ဆေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အမှာစာထဲမှာ ငွေတောင်းခံလွှာမပါရှိပါက e-store အနေနဲ့ အမှာစာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို e-store ၀ က်ဘ်ဆိုက်က ၀ယ်ယူခြင်း ရှိ/မရှိစစ်ဆေးပြီး သင့်ရဲ့ ပစ္စည်းပြန်လည်အပ်နှံမှု တောင်းခံလွှာကို စစ်ဆေး အတည်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စည်းအပျက်ကို လက်ခံရရှိရင် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ?
If the item you received is damaged, please complete the Online Return Process within 24h and pack the item in its original package, with full accessories and buying invoice.
ပစ္စည်းအပျက်ကို လက်ခံရရှိပါက ကျေးဇူးပြုပြီး အွန်လိုင်းပစ္စည်းအပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၄ နာရီအတွင်း ဖြည့်စွက်ပြီး ပစ္စည်းကို မူရင်းအထုပ်မှာ တွဲဖက်ပစ္စည်းများနဲ့အတူ ဝယ်ယူမှုဘောက်ချာနဲ့တကွ ထုပ်ပိုးထားပါ။
Where can I send my return package to e-store?
e-store ကို ပစ္စည်းပြန်လည်အပ်နှံဖို့အတွက် ဘယ်ကို ပို့လို့ရပါသလဲ?
Customers should contact us to arrangeapick up from home via our logistics partner.
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကတဆင့် သင့်အိမ်ကို လာယူနိုင်ဖို့အတွက် customer များအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ် သင့်ပါတယ်။
Can I return an item if it is over return window of 14 days upon receipt?
လက်ခံရရှိပြီးနောက် ၁၄ ရက်ကျော်မှ ပစ္စည်းကို ပြန်အပ်လို့ ရပါသလား?
We are sorry that your item cannot be returned after 14 days upon receipt. We suggest you contact and send the item directly to its warranty center, if available, for prompt assistance. You can find the contact information of your product’s warranty center on the warranty card inside your package. Not all products will come withawarranty.
ဝမ်းနည်းပါတယ် ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီး (၁၄) ရက်အကြာမှာ ပြန်အပ်လို့ မရပါဘူး။ အကူအညီချက်ချင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ပစ္စည်းရဲ့ အာမခံစင်တာကို ဆက်သွယ်ပြီး တိုက်ရိုက်ပေးပို့ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ပစ္စည်းရဲ့ အာမခံစင်တာကို ဆက်သွယ်ရမယ့် အချက်အလက်တွေကို အထုပ်အတွင်းက အာမခံကဒ်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအားလုံးကတော့ အာမခံနဲ့လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Is there any domestic area e-store cannot deliver to?
e-store မပို့ပေးနိုင်တဲ့ ပြည်တွင်းက နေရာတွေက ဘယ်နေရာတွေလဲ?
E-store delivers to all domestic areas. We partner with leading logistics players and we also have our own delivery capabilities to serve you best.
e-store က ပြည်တွင်းက နေရာဒေသအစုံကို ပေးပို့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်၍ံရဲ့ ထိပ်တန်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၊ တို့နဲ့ ပူးပေါင်းထားတဲ့အပြင် ကိုယ်ပိုင်ပေးပို့နိုင်စွမ်းလည်း ရှိတဲ့အတွက် သင့်ကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ။
မှာထားတာကို ဘယ်အချိန်မှာ ရမလဲ?
After you have successfully placed your order, you will receive your order in 2-5 working days often much faster.
မှာကြားမှုကို အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါ ၂ ရက်ကနေ ၅ ရက်အတွင်း လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။
လာပို့မယ့် ရက်နဲ့ အချိန်အတိအကျကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Our courier will call you for scheduling before delivery.
ပို့ဆောင်သူက လာမပို့ခင်မှာ သင့်ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အချိန်ပြောကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှာစာ ရောက်ရှိဖို့ အချိန်ဘယ်လောက် ကြာပါသလဲ?
Orders take 2-5 working days to arrive nationwide, often much faster.
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ဆို အမှာစာရောက်ရှိဖို့ ၂ ရက်ကနေ ၅ ရက် ကြာပါတယ်။
ပစ္စည်းက မပြည့်စုံဘူး ဒါမှမဟုတ် ပျက်စီးနေရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
If you receiveaproduct that is incomplete or damaged, please complete the Online Return Process, soon as possible and not later than 48 hours from the time of receipt.
ပစ္စည်း မပြည့်မစုံ ဒါမှမဟုတ် အပျက်ကို လက်ခံရရှိပါက ကျေးဇူးပြုပြီး အွန်လိုင်းပစ္စည်းအပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ခံရရှိချိန်ကနေ ၄၈ နာရီထက် နောက်မကျဘဲ အမြန်ဆုံး ဖြည့်စွက်ပါ။